Yugyan Daily » नासा मार्स रोभर: नयाँ अन्तरिक्ष यानले कसरी मङ्गल ग्रहमा प्राचीन जीवनको सङ्केत पत्ता लगाउला?
यदि मङ्गलमा कुनै जीवको उत्पत्ति भएको रहेछ भने पनि वैज्ञानिकहरूले कसरी त्यसको पहिचान गर्लान्?
अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाको स्वचालित यान रोभर पर्सभीरन्सले मङ्गल ग्रहमा जीवनको अस्तित्वको सङ्केत खोज्न प्राचीन ताल भएको एउटा खाल्डोमा अन्वेषण गर्नेछ।
तर पहिला त्यस्तो थिएन। झन्डै ३.५ अर्ब वर्षअघि पानी सतहमा बग्थ्यो। त्यहाँ पानी बगेको स्थानमा अहिले पनि धर्सा छन्।
नासाले मंगल ग्रहका कम्पनबारे अध्ययन गर्ने
कार्बन डाईअक्साईडको बाक्लो वायुमण्डलले थप खतरनाक विकिरण रोक्न सक्थ्यो।
उक्त यानले कार्बनयुक्त अणुहरू पनि पत्ता लगाएको थियो।
अब पर्सभीरन्स रोभरले जैविक तत्त्व परीक्षण गर्न बनाइएका उपकरण प्रयोग गरेर उस्तै पर्यावरणमा अन्वेषण गर्नेछ।
मङ्गल ग्रहको खाल्डोको नाम लाङ्टाङ
क्यालिफोर्नियास्थित नासाको जेट प्रपल्शन लबरटरी (जपीएल) को उक्त परियोजनामा संलग्न वैज्ञानिक केन विलिफर्ड भन्छन्, “भाइकिङपछि नासाको यो पहिलो अभियान हो।”
उनका भनाइमा भाइकिङ विद्यमान जीवनको खोजीको निम्ति थियो।
त्यो यानले उक्त ग्रहको चट्टानमा प्वाल पार्नेछ। त्यहाँबाट मुख्य अंश निकाल्नेछ अनि कन्टेनर र सतहमा राखिदिनेछ।
त्यसलाई पछि पठाइने अर्को यानले ती नमुना सङ्कलन गर्नेछ। मङ्गलको कक्षमा त्यसलाई विस्फोट गरिनेछ र विश्लेषणको निम्ति पृथ्वीमा पुर्‍याइनेछ।
मङ्गल ग्रहमा ओर्लियो नासाको ‘इन्साइट’ रोबोट
पृथ्वीमा हामीले प्रत्येक अंशमा रहेको खनिज कणको मात्रा पत्ता लगाउन सक्छौँ।
साहसी पर्सभीरन्सको प्रतीक्षाको परिणाम जे भए पनि हामी पृथ्वीको नजिकको छिमेकीलाई बुझ्ने नयाँ चरणको सँघारमा छौँ।